Google's SameSite Upgrade Inosimbisa Nei Vaparidzi Vachifanira Kupfuura Beyond Makuki eVateereri Targeting | Martech Zone
Kuvhurwa kwe Google's SameSite Kwidziridza muChannel 80 nemusi weChipiri, Kukadzi 4 anonongedzera imwezve chipikiri mubhokisi rechitatu-bato bhurawuza makuki. Kutevera pazvitsitsinho zveFirefox neSafari, izvo zvakatovharira chechitatu-bato makuki nekukasira, uye Chrome iripo yecokie yambiro, iyo SameSite kusimudzira inowedzera kusungira pasi pakushandisa inoshanda yechitatu-bato makuki kune vateereri kunongedzera.
Iko shanduko iri pachena inokanganisa vashambadzi vetekiniki vanovimba nekwechitatu-bato makuki zvakanyanya, asi vaparidzi vasingagadzirise yavo saiti marongero kutevedzera izvo zvitsva hunhu zvakare vanozokanganiswa. Izvo hazvingodziviriri chete kuita mari nevechitatu-bato zvirongwa zvehurongwa, asi kukundikana kutevedzera kuchamisawo kuedza kwekuteedzera maitiro emushandisi akakosha zvakanyanya pakushandisa zvirimo, zvinoenderana nevanhu.
Izvi zvinonyanya kuitika kune vaparidzi vane nzvimbo dzakawanda-kambani imwechete haina kuenzana kune saiti imwechete. Izvi zvinoreva kuti, pamwe neyatsva kukwidziridzwa, makuki anoshandiswa pane akawanda zvivakwa (muchinjiko -saiti) anozotorwa sechitatu-bato, uye nekudaro akavharirwa pasina marongero akakodzera
Chinja Madhiraivhu Kugadzira
Kunyange vaparadzi vachizoda kuve nechokwadi chekuti saiti yavo inovandudzwa nehunhu hwakakodzera, shanduko iri nyore neGoogle inofanirwawo kuita kuti vaparidzi vafunge kaviri nezvekuvimba kwavo nekuki-yakanangwa nemushandisi. Sei? Nezvikonzero zviviri:
Vatengi vari kuwedzera kunetseka nezvekuti makambani ari kushandisa sei data ravo.
Pane imwe nzira yakatwasuka yekuvaka girafu yekuzivikanwa.
Kana zvasvika kune zvakavanzika zve data, vaparidzi vanotarisana nemunondo unocheka kaviri. New data inoratidza izvozvo vatengi zvakanyanya kuda zvemunhu zvemukati kurudziro dzinogona kuunzwa chete nekuunganidza uye kuongorora maitiro ehunhu hwavo. Asi, vatengi vanokakavara zvakanyanya nezvekugovana iyo data. Asi, sekuziva kwevaparidzi, havagone kuva nazvo nenzira mbiri. Free zvemukati zvinouya nemutengo, uye ipfupi paywallwall, iyo chete nzira yevatengi yekubhadhara ndeye yavo data.
Ivo vanoda kuita kudaro - 82% vangangoda kuona zvemukati-zvinotsigirwa pane kubhadhara kubhadhara. Izvi zvinoreva kuti basa riri pavaparidzi kuti vave vakangwarira uye vanofungisisa nemabatiro avanoita data remushandisi.
Imwe Nani irinani: Email
Asi, zvinoitika, pane nzira inoshanda zvakanyanya, yakavimbika uye chaiyo yekuvaka girafu yekushandisa pane kuvimba nekuki: iyo email kero. Panzvimbo pokudonhedza makuki, izvo zvinopa vashandisi fungidziro yavari kuongororwa, kuteedzera vashandisi vakanyoreswa kuburikidza neemail kero, uye kusunga iyo kero kune yakasarudzika, inozivikanwa kuzivikanwa ndiyo nzira yakatendeka uye yakavimbika yekuita kwevateereri. Heino chikonzero:
Email is kupinda-mukati - Vashandisi vakasaina kuti vatore tsamba yako kana kumwe kutaurirana, vachipa mvumo yako kuti utaure navo. Ivo vari mukutonga uye vanogona kusarudza-chero nguva.
Email yakanyatsojeka - Cookies anokwanisa chete kukupa iwe wakashata pfungwa yemushandisi persona zvichienderana nehunhu - ingangoita zera, nzvimbo, tsvaga uye tinya maitiro. Uye, ivo vanogona zvakare kuve vakasvinwa nyore kana vanopfuura munhu mumwe vanoshandisa bhurawuza. Semuenzaniso, kana mhuri yese ikagovana laptop, amai, baba uye hunhu hwevana zvese zvinosanganiswa kuita rimwe, inova njodzi yakanangwa. Asi, kero yeemail yakasungirwa yakanangana neumwe munhu, uye inoshanda pamidziyo yese. Kana iwe ukashandisa zvinopfuura chinhu chimwe chete, kana kuwana chishandiso chitsva, email ichiri kushanda seinoramba ichizivikanwa. Iko kushingirira uye kugona kubatanidza tinya nekutsvaga maitiro kune inozivikanwa mushandisi chimiro inobvumira vaparidzi kuvaka yakafuma, yakajeka kwazvo mufananidzo wezve musarudzo zvaunofarira uye zvaunofarira.
Email inotendwa - Kana munhu anoshandisa kusaina neemail kero, vanozviita zvizere vachiziva kuti vachawedzerwa pane yako runyorwa. Izvo zvapfuura-ivo vachiziva kukupa kubvumidzwa, zvakasiyana makuki ayo anonzwa kunge iwe urikunyangira kutarisa maitiro avo pamusoro pefudzi ravo. Uye, zvidzidzo zvinoratidza kuti vashandisi vane 2/3 mukana wekubaya pane zvemukati - kunyangwe kushambadza-zvinobva kumuparidzi wavanovimba. Kuenda kune email-yakanangwa kunongedza kunogona kubatsira vaparidzi kuchengetedza iko kuvimba, kwakakosha kwazvo munhau dzanhasi dzenhema, nharaunda isina chokwadi.
Email inovhura musuwo weimwe-kune-imwe chiteshi - Kana iwe uchinge waumba hukama hwakasimba nekuziva mushandisi uye kuratidza kuti iwe uchaendesa zvirimo zvinoenderana uye zvinoenderana nezvinodiwa zvavo, zviri nyore kuzvibatanidza pamusoro pekiteshi nyowani, senge push notices. Kamwe vashandisi pavanovimba zvemukati, cadence uye kurudziro, ivo vanokwanisa kuwedzera hukama hwavo newe, vachipa mikana mitsva yekuita pamwe nekuita mari.
Ipo kuvandudza masayiti kutevedzera Shanduko yeSameSite kungave kuri kurwadziwa izvozvi, uye kunogona kutema yakananga mumari yevaparidzi, chokwadi chiri kudzora kuvimba nekatatu-bato makuki chinhu chakanaka. Kwete chete kuti ivo vari kuve vashoma kukosha kana zvasvika pakuteedzera emumwe mushandisi zvido, asi vatengi vari kuwedzera kuwedzera kusava nechokwadi.
Kuchinja izvozvi kune imwe nzira yakatendeka, yakavimbika seemail yekuziva uye kunongedza vashandisi inopa remangwana-rakagadzirira mhinduro inoisa vaparidzi mukutonga kwehukama hwevateereri uye traffic, pane kuvimba zvakanyanya kune vechitatu mapato.
Tags: chromiumemail kunyoresagoogle ChromesamesiteTracking
Jeff anoshanda se CEO we Jeeng, kambani yekuvandudza tekinoroji inobatsira makambani kuita mari yavo email tsamba dzenhau kuburikidza nezvinochinja zvemukati. Mutauri anogara achitaurwa paDigital Media conferences, akaiswawo paCNN, CNBC, uye mune dzakawanda nhau nemagazini ebhizinesi. Jeff akawana MBA ine musiyano wepamusoro kubva kuHarvard Business School uye akapedza Summa Cum Laude neBA muEconomics kubva kuColumbia University.
Muimbisi: An Organic Kushambadzira Platform yeYako Enterprise MarTech Stack